imali yamaphepha Bitcoin kulindeleke ukuba zingatholakali kuzo Singapore ekupheleni konyaka - Blockchain Izindaba
imali yamaphepha Bitcoin kulindeleke ukuba zingatholakali kuzo Singapore ekupheleni konyaka
Tngem, inkampani hardware isikhwama mfihlo uqalile ukudayiswa umshayeli Bitcoin yayo banknotes Singapore emakethe.
Tangem ihlose ukwenza ukuthengiselana ngokomzimba usebenzisa cryptocurrency zijwayele ukuba noob abathengi, futhi uhlela ukukhiqiza izigidi amanothi ekupheleni konyaka.
Ngo Singapore, ezweni ogama imithetho bayengeseka kakhulu kokubili cryptocurrency nobuchwepheshe blockchain, amanothi kuyoba kungathengwa egatsheni Suntec eMzini design esitolo chain Megafash.
amanothi, okuyinto kuyofika e namahlelo 0.01 futhi 0.05 BTC ($92 futhi $463 ngokulandelana), empeleni eyiphepha-like hardware wallets.
Blockchain Izindaba 19 Januwari 2018
Thumela Previous:Coinbase izinhlelo ukuvula ihhovisi elisha e-Chicago
Thumela Landelayo:12 amabhange Chinese esetshenziswa blockchain e 2017
May 18, 2018 ngesikhathi 5:38 AM
May 31, 2018 ngesikhathi 3:29 AM
Juni 2, 2018 ngesikhathi 1:00 PM